UDkt Gugulethu Mazibuko ehalaliselwa yiNxusa-Jikelele laseNdiya, uMnu Anish Raja, ngencwadi yakhe ethi: Imizwilili.
Isifundiswa sakwa-Humanities Sihumushele EsiZulwini Izingoma Zamafilimu zesiHindi
Umfundisi omkhulu waseSikoleni sezobuCiko (eziLimini zoMdabu), uDkt Gugulethu Mazibuko, usanda kwethula incwadi entsha ethi Imizwilili noma Golden Melodies equkethe izingoma zamafilimu angama-20 adumile esiHindi ahunyushelwe esiZulwini.
‘Umculo wase-Bollywood uyintandokazi emhlabeni. Kube nesidingo sokuhumushela esiZulwini lezi zingoma zamafilimu ukuzama ukwakha nokuqinisa ubudlelwano phakathi kwala masiko,’ kusho uMazibuko.
INxusa-Jikelele laseNdiya eThekwini, i-Swami Vivekananda Cultural Centre ne-Hindi Shiksha Sangh (SA) bamcela ukuthi abambe iqhaza kulo msebenzi.
‘Esifundazweni lapho kukhulunywa isiZulu kakhulu kusona, kumqoka ukwabelana ngesiko yesiHindu ngomculo. Lo msebenzi ubalulekile ekwakheni isizwe nokuhlalisana ngokuhlanganisa izizwe ezehlukene ngomculo namangamafilimu,’ kwengeza uMazibuko. ‘Izincwadi nezinye izinhlobo zobuciko kuhlula zonke izindlela ukwakha ulimi oluqondwa wumhlaba wonke. Le ncwadi ihlose ukuvala igebe lokungazani phakathi kwamasiko ehlukene nokuqhakambisa ulimi lwesiHindi nesiko elinothile laseNdiya.’
Lezi zingoma zithinta izihloko eziningi njengothando, ukulahlekelwa, ubudlelwano bomndeni, ukusinda, ukholo, ukunqoba nokuthanda imvelo.
UMazibuko uchazekile wukuhunyushwa kwezingoma njengoba ewumuntu okhuluma isiZulu. ‘Bekufanele ngiqinisekise ukuthi akunakudideka ngesiko laseNdiya. Lo msebenzi ukhulise ikhono lami lokuhumusha, okuyithuba engilibongayo. Njengesifundiswa sezamagugu namasiko, loku kungikhuthaze ukuthi ngenze ucwaningo lokuqhathanisa phakathi kwesiko lesiHindu nelesiZulu ngomculo. Ngivuleke amehlo ngamanoni ezingoma ezinjenge-Phizaa Ke Phuul Pe (Izimbali ZaseKwindla)', kusho yena.
Le ncwadi iyatholakala (mahhala) eziNdlini zeNxusa laseNdiya eThekwini.
ACCESS Award Recognises UKZN Student and Staff Member’s Contributions to Habitable Planet
Anaesthetics Acknowledges Top Student
Research Aims to Improve Delivery of Medical Services in Rural South Africa